Oovimba be-TRX-Funda ukurhweba
I-CEO ye-Tron iNyathela phantsi ukuze ilandele amabhongo e-Crypto-Related Diplomatic
Umseki kunye ne-CEO ye-Tron (TRX) u-Justin Sun ubhengeze ukuba uyaqubuda njenge-CEO esebenzayo namhlanje. I-crypto-billionaire ixelele uCoinDesk ukuba ugxininiso lwakhe ngoku lutshintshele ekunyanzeliseni ukuqinisekiswa kweteknoloji ye-blockchain eLatin America.
Ukuphumeza le njongo, u-Sun usanda kuthatha indima ka-ambassador karhulumente waseGrenada kwi-World Trade Organization (WTO).
Ngelixa engasayi kuphinda adlale indima ebonakalayo kwimisebenzi yemihla ngemihla yeTron, umsunguli waqinisekisa ukuba uya kuba negalelo ngayo yonke into anako ekuqhubeleni phambili inethiwekhi.
U-Justin Sun uye waba ngumsebenzi wemicimbi ye-blockchain ye-TRX ukususela ekudalweni kwayo kwi-2018. Inethiwekhi iye yaba yinto ekhuphisanayo ephambili kwi-Ethereum, eyadalwa yi-TRX.
I-Tron inikezela ngeendleko ezingabizi kakhulu kwi-Ethereum kwaye ibonelela ngeemali eziphantsi zokuthengiselana kwi-stablecoins, njenge-Tether (USDT), kwaye ixhasa amathokheni e-DeFi, njenge-BTC eQiniweyo (i-WBTC) kunye ne-Ether eSongelweyo (WETH).
Emva kokubhengeza inguquko yakhe ekuqhubeni inethiwekhi, iLanga yaqaphela ukuba abanini be-TRX bazakuthatha indawo yokusebenza kwenethiwekhi, becinga ukuba ifumene ukunatyiswa ngokupheleleyo.
Okwangoku, akukabikho mntu uza kungena ezihlangwini zikaLanga. Oko kuthethiweyo, akuqinisekanga ukuba oku kuya kuba ngumyalelo wosuku wenethiwekhi.
Amanqanaba eTron angundoqo aza kujongwa- nge-17 kaDisemba
I-TRX igcine i-bearish trajectory ngoLwesihlanu, njengoko ixabiso lisondela kwiveki yokugqibela ye-0.0790 yeedola. Uluvo lwe-bearish luza phakathi kokuthengisa okuthe gqolo kwimarike yonke eye yathwaxa ishishini iiveki ezininzi.
I-TRXUSD - Itshathi yeeyure ezi-4 kwi-Binance. Umthombo: TradingView
Umthamo wokuthengisa we-Bearish kwi-TRX uhlala kwicala eliphezulu, ebonisa ukuba sinokubona ikhefu le-bearish ngaphantsi kwe-tripwire yam ehlayo. Nangona kungenakwenzeka kakhulu, ukukhusela umgca we-0.0800 yeenkunzi kwiiyure ezizayo kunokumisa i-bearish momentum evumela iinkunzi zeenkomo ixesha elaneleyo lokuhlanganisana kwaye zityhale i-$ 0.0900 uphawu.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.0850, i-$ 0.0900, kunye ne-$ 0.0950, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.0780, i-$ 0.0760 kunye ne-$ 0.0740.
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 8.21 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.38%
tags Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuchwephesha, TRON, TRX
Ukuhlaziywa: 30 Julayi 2021
Ukuhlaziywa: 4 Juni 2021
Ukuhlaziywa: 14 May 2021
Ukuhlaziywa: 7 May 2021